DAAWO: M/weyne Farmaajo oo arrin aan lafileyn kala kulmay Galmudug, cadeeyeyna. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: M/weyne Farmaajo oo arrin aan lafileyn kala kulmay Galmudug, cadeeyeyna.
September 17, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 2
Mareexaan maahan dad lagu xisaabtamo oo waxaa markhaati ka ah Cabdullahi Farmaajo. Mareexaan waa wax matarayaal aad u caqli liita oo ah beesha soomaaliyeed ee loogu awr kacsi badan yahay. Haaweydaa kubadda sideeda isugu laad laadda oo ka caqli batay. Waxaa halkaa dhigay xinka OG iyo MJ oo dib jiro ka wada dhigay. Markay horumarka iyo dawladnimada noqoto eber bay taagan yihiin. Farmaajo intuu deegaano Hawiye isku mashquuliyay isu fiirsha iyo inta uusan deegaan Mareexaan cag ba saarin. Saas baa ka dhab ah reerka.
Mareexaan Siyaad Bare marku dhintay bay iyaguna la dhinteen.
Maanta Eelay iyo yamyam iyo qadaad weyn baa haweysata maalin dhoweyd Digi iyo mirifle Baardheere ayey kula qabsadeen ilkayarta.
Maalintaas baan ogaaday ilkayar waaba cawaam cidla taagan